HeersareMuxumed: Yaa loo hubaynayaa?
Yaa loo hubaynayaa?
Arrinta aan ka hadli doonaa waxay i xusuusisay horraantii sagaashanaadkii waxa aan ka mid ahaa arday wax ka baran jirtay dugsi ku yaalla dariiqada Xaaxi oo ka tirsan gobolka Daad-madheedd (Oodweyne). Xilliyadaasi waxay ahayd intii aanay Somaliland hagaha adag ku taagnayn oo dagaallo ayaa iska jiray.
Waxa dugsigii aan dhiganayay la keenay deeq kala duwan oo isugu jirtay buugaag, qalimo noocyo kala duwan ka koobnaa iyo agab kale. Waxa buugaagtaa ku jiray qaar loogu talogalay in wax lagu sawiro oo cabbirkoodu ahaa sida waraaqda A4-ta ee wax lagu daabacdo oo kale.
Waxay ahayd ciiddii hore ee soon-fur ee aynu soo dhaafnay. Waxa aanu ku sugnayn mid ka mid ah hudheelada Hargeysa. Si kedis ah waxay indhahaygu u qabteen wiil yar oo aan da' ahaan ku qiyaasay illaa todoba jir. Wuxuu ku jeeni-qaarnaa qori caag ah oo loo eekaysiiyey qoriga silsilad laha ah ee soomaalidu u taqaanno badh-daloolka amma silsilad laha.
Ilmahan yari marka uu ku ababo qori caag ah laakiin leh qaabka qoriga rasmiga ah, keeb, dhacaya isla markaana ku abuuraya inuu baranayo dhaqan la xidhiidha inuu marka uu koro uu isticmaali karo qoriga rasmiga ah ee wax lagu dilo, waxa lagu jiheeyey dubtii dagaalka. Waana waxa aynu u baahannahay in laga bogsado oo laga gudbo waa mahadhooyinkii dagaalka'e.
Posted by HeersareMuxumed at 7:58 AM
Askarigii Sharafta la hoyday oo qoyskiisii deeq ay...